ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၈-၃-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၂၈-၃-၂၀၁၃ - ညပိုင်း)
- ပြည်သူ့အသက်အိုးအိမ် ထိပါးရင် အင်အားသုံးနှိမ်နင်းမည်ဟု သမ္မတ ပြော click
- အကြမ်းဖက်မှုများ ပြတ်သားစွာ အရေးယူရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ကို သမ္မတ အမိန့်ပေး click
- မြို့ပြအင်အားသုံးပြီး ထိထိရောက်ရောက် တားဆီးနှိမ်နင်းသွားမည် click
- လတ်တလော ဖြစ်ပွားသည့် ဆူပူများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ မိန့်ခွန်းပြောမည် click
- ပြည်ထဲရေး၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ပဋိပက္ခ ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း ထိရောက်ထက်မြက်ရန် လို click
- သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများ လုံးဝ လက်မခံဟု ၈၈ ဆို click
- ပဲခူးတိုင်း သဲကုန်းနှင့် မိုးညိုတွင် ဗလီနှင့်အိမ်များ ဖျက်ဆီးခံရ click
- ပေါင်းတည်တွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် အကြမ်းဖက်မှု အထမမြောက် click
- ပဲခူးတိုင်း ပဋိပက္ခဖြစ်စဉ် ကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ် click
- အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့ ဦးသိန်းစိန်ကို စာပို့တောင်းဆို click
- ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ ဟိန္ဒူအဖွဲ့ချုပ်မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မွတ်ဆလင်များအား တိုက်ခိုက်နေမူကို ရှုတ်ချ click
- ဘာသာပေါင်းစုံမှ ခေါင်းဆောင်များ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုတောင်း click
- ပဋိပက္ခများ ပြီးဆုံးရေးအတွက် မေတ္တာထားကြရန် ဘာသာပေါင်းစုံ တိုက်တွန်း click
- အကြမ်းဖက်မှုမဖြစ်အောင် တရားဓမ္မနဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးဖို့ အရေးကြီးတယ် (မေးမြန်းခန်း) click
- အကြမ်းဖက်မှုတွေ မဖြစ်အောင် ဘယ်လို တားဆီးကာကွယ်နိုင်မလဲ (ဆောင်းပါး) click
- ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့အတူ လက်တွဲလုပ်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော click
- NLD အဖွဲ့ဝင် တသောင်းကျော် နုတ်ထွက် ဆိုသည့်သတင်းမှာ မဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဦးဥာဏ်ဝင်း ပြော click
- ၂၀၁၃ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်စေချင် (ရုပ်သံ) click
- SSA မြောက်ပိုင်း တပ်စခန်း ၂ ခု အစိုးရတပ်က ဖယ်ရှားခိုင်း click
- ဂတ်စ်ပိုက်လိုင်း လျော်ကြေး ခြံပိုင်ရှင် အစစ်အမှန်များ မရ click
- မြွေတောင် သတ္တုတူးဖော်ရေးစီမံကိန်း နိုင်ငံတကာဥပဒေ စံချိန်စံညွန်းအတိုင်း လုပ်ရန် တိုက်တွန်း click
- ၀ိုင်းမော်မြို့နယ် နှစ်ခြင်းဖွံ့ဖြိုးရေးခြံရှိ ဒုက္ခသည်များ ထမင်းချက်ရန် ရှို့ထင်း ခက်ခဲနေ click
- အမေရိကန်သံအမတ် ကယားပြည်နယ်မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် လေ့လာ click
- ရခိုင်ကျောင်းသား ရဲမင်းဦး ပျောက်ဆုံးနေမူ စိုးရိမ်မှု တိုးပွား click
- နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်စနစ် လျင်မြန်စွာ ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရေး ကြိုးစားနေဟု ဆို click
- ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ ပို့-သွင်း လိုင်စင်လျှောက်ရန် မလိုတော့ click
- ဂျပန်က မြန်မာဒုက္ခသည်များအတွက် ဒေါ်လာ ၆.၉ သန်း ကူညီ click
- ကရင်နီဒုက္ခသည်စခန်း မီးလောင်မှုမှာ ပေါ့ဆမီး မဟုတ်ဟု ထိုင်းရဲမှူးကြီး ယူဆ click
- မီးဘေးဒုက္ခသည်များ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီ လိုအပ် click
- မိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနေ့ ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ် ဒုက္ခသည်စခန်းများတွင် ကျင်းပ click
- ထိုင်းရောက် မြန်မာအလုပ်သမားများကြား HIV ကူးစက်နှုန်း တိုးလာ click
- ခိုနုမ်းထုန် ချင်းသတင်းဌာန ဂျာနယ် ထုတ်ဝေတော့မည် click
- မိုးယံ လူရွှင်တော်ဖလား ဒုတိယဆုရ ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့ (ရုပ်သံ) click
- တို့အမျိုးသားတိုင်းပြည် solo show (ဓာတ်ပုံသတင်း) click
- ကမ္ဘာ့ကဗျာနေ့ ပုံရိပ်များ (ဆောင်းပါး) click
- အမှိုက်ပုံကို မစွန့်နိုင်သေးသူများ (ဆောင်းပါး) click
- သန်လျင်မြို့မှာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ မီးသင်္ဂြိုဟ်စက်နှင့် ရေခဲတိုက် ဆောက်လုပ် (ရုပ်သံ) click
- တစ္ဆေကို မြင်တွေ့ကြရသည့် ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားမှ သုတေသနအဖွဲ့ click
- ဆရာမအသွင်ပြောင်းမှ သေဆုံးခဲ့ရသည့် ကျောင်းဆရာ click
- မီလျံနာကနေ လူမွဲစာရင်း ဝင်သွားတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံးသမားများ click
တကယ်မသိလို.ပါ ။ ။လက်ပံတောင်း တောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ဟာ
...... တိုင်းပြည် ဘက်ကစဉ်းစားကြည်.ရင် စီးပွားေ၇းအ၇ FAIR ဖြစ်ပါသလား ? ဥပမာ ... နိုင်ငံတော်ကပေးလိုက်ရတဲ. ကြေးနီ တန်ချိန် နဲ. ၊
နိုင်ငံတော် က ရတဲ.ငွေ ( ဦးပိုင် ကယူသွား တဲ.ငွေမပါ ) ၊ တွက်ကြည်.ရင် ကြေးနီ တန်ချိန် ၁ တန်ကို ရသင်. သလောက်၇ပါရဲ.လား ?
လက်ပံတောင်း တောင် ကြေးနီစီမံကိန်း စုံစမ်းေ၇း ကော်မရှင် မှ ၄င်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံေ၇ှ.နေများ
ကွန်ယက် ၊ နဲ. အခြားတတ်သိ ပညာရှင်များ မှ ၄င်း
ပြည်သူများသိအောင် တင်ပြစေလိုပါတယ် ။
...... တိုင်းပြည် ဘက်ကစဉ်းစားကြည်.ရင် စီးပွားေ၇းအ၇ FAIR ဖြစ်ပါသလား ?
(မှတ်ချက် ။ ။ ဦးပိုင် မှ ယူသွားငွေ မပါ ။ )